How to Password Protect OneNote 2010 | TechSectors
How to Password Protect OneNote 2010
5:25 AM LeaveaComment
Microsoft OneNote 2010 မှာ Password protection ပေးရတာ အင်မတန်လွယ်ပါတယ် -
Password ပေးဖို့အတွက် အောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်း အရင်ဆုံး ကိုယ် Password ခံထားချင်တဲ့ Section tab တစ်ခုပေါ်မှာ right-click ထောက်ပါ - နောက် shortcut menu မှာတွေ့ရမယ့် “Password Protect this Section” ကို click ပေးပါ။
အဲလိုပေးလိုက်ရင် Notebook ရဲ့ ညာဘက်ခြမ်းမှာ Password Protection task pane ကို ခုလိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ် - အဲ့မှာ Set Password button ကို click ပေးပါ။
Password Protection dialog box မှာ ကိုယ့် password ကိုရိုက်သွင်းပြီး OK ပေးပါ။
အဲလို လုပ်ဆောင်ပြီးသွားတာနဲ့ ကိုယ့် Notebook ကို lock လုပ်ပြီးသွားပြီး - နောက်ဝင်တဲ့ အချိန်တိုင်း အရင်လို လျောလျောရှုရှု ဝင်လို့ မရတော့ပဲ ခုလို Section ထဲကို ဝင်ဖို့ Password တောင်းပါလိမ့်မယ်။
Password options နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး File-> Options-> Advanced-> Passwords မှာ စိတ်ကြိုက် ပြင်ဆင်ထားနိုင်ပါသေးတယ် - အဲ့မှာဆိုရင် ကိုယ့် Notebook ထဲက ရေးလက်စ Sections တွေကို ဘယ်အချိန်မှာ အလိုလျောက် lock လုပ်ဖို့ ဆိုတာမျိုးထိ သတ်မှတ်ထားလို့ ရပါတယ်။
တစ်ခုသိထားရမှာ Onenote မှာသုံးတဲ့ Passwords တွေဟာ sections တစ်ခုချင်းစီအလိုက်ပဲ Lock လုပ်လို့ ရပါတယ် - Notebooks အားလုံးကို lock လုပ်တာမျိုး မဟုတ်ပါဘူး - တကယ်လို့ ကိုယ့် password ကို အသစ်ပြန်ပြောင်းချင်တာမျိုး ဖြစ်စေ - Remove လုပ်ချင်တာမျိုးဖြစ်စေ - အပေါ်ဆုံးမှာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ “Password Protect this Section” ကို ခေါ်ယူတဲ့ procedure အတိုင်းပဲ ပြန်သွားပြီး ပြင်ဆင်နိုင်ပါတယ်။
video click , audio click တို့ ဘယ်လိုထည့်လဲ မသိဘူး။
Video တွေ Audio clip တွေထည့်ဖို့ အတွက်က Insert -> Attach File ကနေ ထည့်လို့ ရပါတယ် - ထည့်ပြီးရင်လည်း အဲ့ကနေပဲ တိုက်ရိုက်နားဆင်လို့ ရပါတယ်။ အသေးစိတ်အသုံးပြုပုံတွေ Recording လုပ်ပုံတွေကို ဒီ့ထက်လေ့လာနိုင်အောင် လောလောဆယ် MS Office 2010 အသုံးပြုနည်း စာအုပ်တွေ တင်ပေးနေပါတယ် - အားလုံးပြီးသွားရင် E-Books & Tutorials ကဏ္ဍအောက်မှာ MS Office 2010 Ebooks Collectionဆိုပြီး တင်ထားပေးပါမယ်။
Outlook မှာ မြန်မာဖောင့်ပေါ်အောင်က သီးသန့်ထပ်ပြီး ဖော်ပြပေးပါမယ်။
How To Ask Smart Questions ( Before You Ask )
How to backup your Gtalk chat logs
Unicode & Zawgyi
7 Chrome Annoyances
Google's New Navigation Bar
Advanced sign-in security for Google account
( Untouched ) Copy ?? or ( Touched ) Copy ??
What is the difference between Chrome and Chromium...
Google Chrome and Mouse middle button shortcuts